Xubnaha shaqaalaha CAPI USA waxay ka diiwaan geliyaan codbixiyaasha Jimcaha Fresh Food, munaasabad qeybinta wax soo saar bilaash ah. Sumcadda sawirka: CAPI USA
In ka badan 23 milyan oo muhaajiriin ah oo ku nool Mareykanka ayaa xaq u leh inay u codeeyaan doorashada madaxweynenimo ee sannadkan, sida laga soo xigtay Xarunta Cilmi baarista ee Pew. Diiwaankan sare wuxuu ka dhigaa qiyaastii 10 boqolkiiba guud ahaan codbixiyaasha guud ee qaranka. Su’aashu waxay tahay imisa ka mid ah muwaadiniintan jinsiyadda qaatay ayaa cod bixin doona deyrtaan. Muhaajiriinta waxay la kulmaan caqabado waaweyn oo xagga codeynta ah sida kala duwanaanshaha luqadda, cabsida maamulada, saadka codbixinta, iyo la'aanta macluumaad lagu kalsoon yahay oo ku saabsan musharixiinta iyo arrimaha.
Guud ahaan muuqaalka siyaasadeed, tirada sii kordheysa ee dadku waxay isku raacsan yihiin in dimuqraadiyad caafimaad qabta ay kuxirantahay kaqeybgal buuxa ee dhamaan dadka Mareykanka. Markii la bixinaayay deeq-bixinteedii seddex-meelood, Machadka McKnight wuxuu ku abaal-mariyay 42 deeq oo wadarta $4.3 milyan ah. Wadartaas, $150,000 ayaa tagi doona CAPI USA, oo xarunteedu tahay Brooklyn Center, Minnesota, oo loogu talagalay taageerada guud ee hawlgalka si loo xoojiyo soogalootiga cusub iyo qaxootiga loona kordhiyo ka qaybgalka bulshada. Si aad u aragto liiska buuxa ee deeqaha la ansixiyay saddex meelood meel, booqo annaga keydka macluumaadka.
"Waxaan ku faraxsanahay inaan taageerno CAPI USA dadaalkeeda ku aadan in lagu xoojiyo dhamaan reer Minnesota inay ka qayb galaan geedi socodka dimoqraadiyada, helitaanka macluumaadka bulshada, iyo inaan dareemo kalsooni qaadashada go'aano xog ogaal ah oo ku saabsan arrimaha iyaga khuseeya." -LANDRIGA LANDESMAN, SIDA LAGU QAADO
In 2018, CAPI USA ayaa aasaasay Daaro Awoodaha Aasiya ee Minnesota Isbahaysiga (IMAP) ee iskaashiga la leh Mashruuca Aasiya Ameerika. Isbahaysigu wuxuu ujeedkiisu yahay inuu ku dhiirrigeliyo bulshooyinka Aasiya iyo Jasiiradaha Baasifiga iyo dadyowga kale ee soo galootiga ah ee ku nool Minnesota inay ka qaybqaataan geeddi-socodka dimuqraadiyadda, iyadoo diiradda la saarayo sannadka 2020 codeynta iyo ka-qaybgalka tirakoobka.
"Codbixinta iyo kaqeybgalka tirakoobka waa laba dariiqo oo muhiim ah oo qofka codkiisa loo maqli karo," ayuu yiri gudoomiyaha guddiga McKnight Debby Landesman. "Waxaan ku faraxsanahay inaan taageerno CAPI USA dadaalkeeda ku aadan in lagu xoojiyo dhamaan reer Minnesota inay ka qayb galaan geedi socodka dimoqraadiyada, helitaanka macluumaadka bulshada, iyo inaan dareemo kalsooni qaadashada go'aano xog ogaal ah oo ku saabsan arrimaha iyaga khuseeya."
Dadaal Abaabulka Codbixiyeyaasha oo Luuqado Badan Ku Shaqeeya
Isbahaysiga Agnet ee Aasiya Aasiya waxaa ka mid ah 13 urur:
Ururka Bulshada Bhutanese ee Minnesota
Filipinx ee Xuquuqda Muhaajiriinta iyo Caddaaladda Jinsiyadaha ee Minnesota
Hmong Americans cadaalad
Haweenka Hmong Oo Wada Jir Ku Gaadhay
Karen Ururka Minnesota
Xarunta Caawinta Lao ee Minnesota
Fayoobaanta Qoyska Sewa-Aasiyaanka Hindida ah
Kaniisada Katooliga ee St. Columba
Adeegyada Bulshada ee Vietnamese ee Minnesota
Xubno ka tirsan shaqaalaha COPAL munaasabad "COPAL en la Comunidad" si ay uga qayb qaataan codbixiyayaasha Latinx. Kooxdu waxay martigelinaysaa 24 ka mid ah dhacdooyinka gobolka oo dhan inta ka horreysa doorashada. Sumcadda sawirka: COPAL USA
Xagaagii, ururradan waxay horseedeen dadaal isku-dhafan oo luuqado badan leh si kor loogu qaado waxbarashada cod-bixiyeyaasha, diiwaangelinta, iyo abaabulka bulshadooda kahor doorashadii hordhaca ahayd ee Ogosto 2020. Waxay bixiyeen ilo iyo macluumaad ku saabsan u-qalmitaanka cod-bixiyaha, goobaha cod-bixinta, iyo xulashooyinka cod-bixinta iyadoo la eegayo aafada Covid-19. Waxay sidoo kale soo bandhigeen macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan musharixiinta iyo mowqifkooda ku saabsan arrimaha muhiimka ah, oo ay ka mid yihiin socdaalka, sinaanta, waxbarashada, shaqooyinka, iyo daryeelka caafimaadka.
IMAP waxay kaqeyb qaadan doontaa 6,000-99,000 oo reer Minnesota ah oo ka kala yimid daafaha dunida kahor doorashada bisha Nofeembar 2020 - iyadoo labanlaabaysa dadaalkeeda asaasiga ah ee doorashada si kor loogu qaado tirada codbixiyayaasha ee bulshada soogalootiga ah. Wixii ka dambeeya doorashada, CAPI USA waxay qorsheyneysaa inay abuurto istiraatiijiyad sannadka oo dhan u doodda, siyaasadda, iyo nidaamyada isbeddelka shaqada si loo horumariyo sinnaanta iyo ka mid noqoshada dadka soogalootiga ah ee kala duwan ee Minnesota.
"Waxaan ku faraxsanahay inaan gacan ka geysano isku xirnaanta iyo dhisida awooda ururadan ku saleysan bulshada, xoojinta dadaalkooda wadaagga madaniga ah ee ka baxsan doorashooyinka deyrta," ayuu yiri Kara Inae Carlisle, madaxweyne ku xigeenka barnaamijyada McKnight. "Waxaan saadaalineynaa gobol iyo waddan ay dhammaan dadka deegaanku cod ku leeyihiin go'aaminta mustaqbalkeenna la wadaago."
Taageerida tirakoob loo dhanyahay, oo sax ah 2020
Marka lagu daro dhiirigelinta kaqeybgalka cod bixiyaasha, CAPI USA waxay si firfircoon kor ugu qaaday tirakoobka 2020. Waxay gacan ka geysatey faafinta macluumaadka saxda ah ee ku saabsan ujeedka iyo faa'iidada buuxinta tirakoobka waxayna ka dhigtey mid si fudud ay ku heli karaan bulshooyinka muhaajiriinta ah.
Tirakoobka, oo lagu go'aaminayo sida loo qaybinayo maalgalinta iyo ilaha dhaqaalaha ee bulshada maxalliga ah iyo tirada kuraasta ay gobol kasta ku leedahay Aqalka Wakiillada Mareykanka, ayaa ah mid muhiimad weyn leh oo inta badan la fahmi waayo. Dad badan ayaa sheegta walaacyada asturnaanta xogta iyo kalsooni-darrada dowladda markay ka baxayaan tirakoobka.
Tirakoobku wuxuu taariikh ahaan hoos u dhigay bulshooyinka midabka leh. Kooxaha sida CAPI USA waxay muujiyeen inay ka walaacsan yihiin in masiibada Covid-19 iyo isbadalka siyaasadeed ee Xafiiska Tirakoobka Mareykanka ee sanadkan ay caqabad ku noqon karto tirinta saxda ah.
Dhiirigelinta Tirakoobka 2020 ee keydka cuntada CAPI USA. Sawirada Sawirka: CAPI USA
Tirakoobka 2020 wuxuu la kulmay caqabado hawleed oo adag: markii hore waxaa dib u dhigay Covid-19, ka dibna waxaa yimid kii Go'aanka Xafiiska Tirakoobka Mareykanka in la soo gabagabeeyo dhammaan dadaallada tirinta dhammaadka Sebtember - bil ka soo dhakhso badan sidii ay horay u sheegtay.
Bishii Ogosto, McKnight, oo ay weheliyaan 506 hay'ado kale oo samafal ah, ayaa ku soo biiray Guddiga Maalgeliyaasha ee Kaqeybgalka Madaniga iyadoo ku boorineysa Xafiiska Tirakoobka Mareykanka in uusan ku deg degin howsha, maadaama ay sidaa yeeleyso waxay saameyn xun kuyeelaneysaa bulshooyinka kaladuwan ee miyi iyo magaalo iyadoo laga tagayo iyaga oo si aad ah u yar.
Iyadoo loo marayo Golaha Minnesota ee aasaaska, McKnight sidoo kale waa xubin ka mid ah Iskaashiga Abaabulka Tirakoobka Minnesota, taageerida hadafkeeda "u doodista siyaasadaha iyo ilaha dhaqaalaha iyo ka qeybgalinta reer Minnesota si loo gaaro hadafka ah in si buuxda loo wada dhan yahay, daacad ah, oo sax ah Tirakoobka 2020 ee Minnesota."
Xoojinta kaqeybgalka dimuqraadiyadda waa aag cusub oo shaqo u ah McKnight - istiraatiijiyad ay wadaagaan kan cusub Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah (V&EC) waana la kordhiyay Cilmi-badeedka & Tamarta Midwest barnaamijyada. Iyada oo loo marayo barnaamijyadan iyo guud ahaan aasaaska, waxaan higsaneynaa in aan kordhino kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka oo dhan iyo awooda lagu dhisayo awooda, ku lug lahaanshaha dadka kala duwan horumarinta horumarka barwaaqada aan wadaageyno, iyo in la abuuro barxado ka qeybgal ballaaran oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada iyo go'aamada go'aamiya mustaqbalkeenna wadareed. Xilliga ugu horreeya ee baaritaanka V&EC wuxuu furmayaa Oktoobar 1 wuxuuna soconayaa Oktoobar 15.
Mawduuca: Sinnaanta Caadi ahaaneed iyo Ka Qayb-qaadashada, Cilmi-badeedka & Tamarta Midwest, Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah